Arakaraka ny hitomboan’ireo tanora mpianatra be diplaoma no mampitontongana ny toekarem-pirenentsika, tranga nanomboka tamin’ny taona 1958, hoy izy. Ny fampianarana ambaratonga ambony noho izany no tena mila fanorenana ifotony. Anisany ny fahaizana mamolavolana mpianatra mahay mifampiraharaha sy mahay mitarika hahafahany manangana orinasa ho an’ny tenany. Tsy mihoatra ny bacc+5 na master II ny diplaoma takiana, hoy izy dia tokony ho vita fa tsy voatery ny vahiny foana no hanjaka eto amin’ny tanintsika. Foto-kevitra hijoroan’ity sekoly ambony iray ity io, izay marihina fa efa namoaka injeniera miisa 500 hatreto. Namoaka mpianatra am-polony indray izy ireo omaly ka ny 24 amin’ireo no notolorana ny maripahaizana master II. 39 nahazo ireo Diplômes de technicien superieur. Nomena ny licence kosa ny 35 isa ambiny. Nivoaka tamina lalam-piofanana telo samihafa ireto mpianatra ireto dia ny batiment travaux publics, ny télécommunication ary ny management et science économique.